Kulanka Finalka Community Shield Ee Liverpool Iyo Arsenal Oo Xog Cusub Laga Helay Iyo Dhibaatada Klopp & Arteta Haysan Doonta. - Gool24.Net
Kulanka Finalka Community Shield Ee Liverpool Iyo Arsenal Oo Xog Cusub Laga Helay Iyo Dhibaatada Klopp & Arteta Haysan Doonta.
Xidhiidhka kubbada cagta Ingiriiska ee FA-ga ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in kooxaha Liverpool iyo Arsenal ay wada ciyaari doonaan kadib markii ay ku soo kala guulaysteen koobabka Premier League iyo FA Cupka.
Koobka Community Shield oo xili ciyaareed kastaba lagu furo kooxaha ku soo kala guulaystay Premeir League iyo FA Cup laakiin waxay markii hore kooxuhu heli jireen waqti badan oo ay ugu diyaar garoobaan laakiin markan iyada oo labada xili ciyaareed isa saaran yihiin sababtii karoona farayska awgii ayaa wax badan badashay.
Waxaa la ogaaday sabab dhab ah oo keeni doonta in Jurgen Klopp iyo Mikel Arteta ay finalka koobka Community Shield u adeegsan doonaan ciyaartoydooda da’yarta ah isla markaana ayna xidigaha waa wayni in badan ku lug yeelan doonin.
Finalka Cmmunity Shield waxaa la ciyaari doonaa maalinta sabtida ee August 29 waana waqti aad ugu adkaan doonta kooxaha Liverpool iyo Arsenal sababtoo ah waqtiga laga soo laabanayo fasaxa kooban ee xidigaha la siiyay.
Xili ciyaareedyadii hore waxaa koobka Community Shield la ciyaari jiray iyada oo kooxuhu ay muddo laba bilood ah fasax soo ahaayeen, laakiin waxaa sanadkan la ciyaarayaa muddo bil ka yar markii uu xili ciyaareedkani dhamaaday.
Ciyaartoyda Arsenal waxay fasaxa kooban ee la siiyay ka soo laaban doonaan August 17 halka kuwa Liverpool oo laba usbuuc la siiyay ay Melwood ku soo laabanayaan August 15 waxayna tani keenaysaa in ayna Klopp iyo Arteta halis galin karin xidigaha ay xili ciyaareedka cusub ugu xisaabtamayaan.
Arinta kale ee sii xumaynaysa xaalada Jurgen Klopp iyo Mikel Arteta ee finalka Community Shield ayaa ah in kulamada caalamiga ah ee xulalka qaramada loo balansan yahay September 2 ilaa September 10 taas oo haddii ay ciayartoyda waa wayn soo safaan oo ay haddana u ciyaaraan xulalkooda halis dhaawacyo badan ah keeni karta.
Laakiin in koobka Community Shield aanu xisaab ahaan ku jirin koobabka rasmiga ah ee kubbada cagta England ayaa keenaysa in Jurgen Klopp uu gabi ahaanba iska indho tiri karo in uu ciyaartoyda kooxdiisa kowaad halis ku galiyo koob aan la xisaabsan.
Pep Guardiola ayaa hore cadho uga muujiyay markii kooxdiisa Man City loo xisaabin waayay koobka Community Shield ee lagu calaamadiyay in uu yahay koob la heer ah koobabka saaxiibtinimo, waana sabab kale oo Klopp ku sii riixi doonta in uu carruurta kooxdiisa soo safo kulanka Arsenal.
Kooxaha Liverpool iyo Arsenal ayaa koobka Community Shield ku soo guulaystay min 15 jeer waxayna Liverpool markii ugu danbeeyay ku guulaystay 2006kii halka Arsenal ay markii ugu danbaysay ee koobkan ku guulaysatay ahayd sanadkii 2017 kii.
Dhinaca kale waxaa la filayay in finalka Community Shield ee kooxaha Arsenal iyo Liverpool uu noqon doono kulanka ugu horeeya ee kubbada cagta England ee ay qayb taageerayaasha ahi ku soo laaban kareen Wembley Stadium laakiin hadda dawlada UK ayaa taas meesha ka saartay.
Si kastaba ha ahaatee, ciyaartoyda Liverpool oo fasax la siiyay maalintii xili ciyaareedka Premeir League dhamaaday ayaa August 15 ku soo laabanaya tababarka ay ugu diyaar garoobi doonaan Community Shield inkasta oo Klopp uu da’yar soo xulan doono waxaana laba maalmood kadib diyaar garowga bilaabi doona Arsenal.